Blog Archive - Mmasị Mmasị
Mbido » Ndepụta site categoryBlog
Enweela ọtụtụ akụkọ na-emegiderịta onwe ha na-aga gburugburu banyere COVID-19. Ka o sina dị, nghọta dị nkenke bụ na ọrịa a na-eku ume na-akpalite ọnwụ na ndị nwere usoro ahụ ike na-esighi ike ma ọ bụ ndị nwere nsogbu ahụike ndị ọzọ. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ nde ...
March 25, 2020 Admin blog Enweghị asịsa
A na-akpọ coronaviruse, nke akpọrọ dị ka Cov, bụ ọtụtụ ọnụọgụ nke nwere ike ibute ma anụmanụ na ụmụ mmadụ. N'ime mmadụ, ha nwere ike ibute ọrịa dị iche iche na-eku ume, site na oyi na-atụkarị na oyi ịba (ọrịa nkuume). Imirikiti nje ndị a adịghị ike ma nwee ọgwụgwọ ..
March 10, 2020 Admin blog Enweghị asịsa
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe kachasị mma maka mgbakwasa salad maka ụkọ ọnwụ ma kesaa ụfọdụ ndụmọdụ banyere ihe ndị ị ga-eji na salads gị iji nyere aka mee ka metabolism gị dịkwuo mma. Ndụmọdụ ndị a sitere n'aka ndị isi nri Metabolic Dave Ruel & Karine Losier. Ndị a bụ ...
Chekwaa ahụike gị na ahụike gị afọ ọhụrụ na Savings.Com
Na njedebe nke ọnwa January ka njedebe nke ọtụtụ mkpebi nke Afọ Ọhụrụ. Anyị niile anọwo ebe ahụ: ị malitere 2019 na edemede siri ike, kwere nkwa ịrụ ọrụ siri ike ma rie nri ma gụọ akwụkwọ ọzọ. Ma na mberede, ọ bụ February. Mgbochi ọchịchị anwụọla, Super Bowl izu ụka ...
February 4, 2019 Admin blog Enweghị asịsa
Kedu ihe bụ isi na-akpata abụba afọ isi ike? Enwere otutu echiche na nke a. Fọdụ ndị na-ekwu na ọ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa na-adịghị mma. Ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ nrụgide. Na ọtụtụ ndị ọzọ folks kwenyere na ọ bụ n'ihi nwayọ metabolism. Yabụ kedu eziokwu? Na eziokwu, ọ fọrọ nke nta ...
March 3, 2018 Admin blog Enweghị asịsa
Ntụleghachi nke Anaba Running Guide Joe LoGalbo
Otu n'ime ihe ndị mbụ na-abata n'uche mgbe ndị mmadụ na-eche banyere mmega ahụ na otú e si efunahụ ibu. Ọ bụ ya mere ị ga-eji hụ na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nọ n'ụlọ mgbatị ahụ na-abụkarị na mgbochi. Ọ bụrụ na ị na-aga banyere ya na-ezighị ezi ...
February 18, 2018 Admin blog, Nyocha Enweghị asịsa
Kedu otu Mmetụta Na-esi Na Nzuzo Na-enwe Mmetụta Dị Ukwuu Na Ahụ Gị
Isi ihe oyiyi: Pexels.com Kwa ụbọchị, ndị mmadụ na-ekpuchi nsị na ikuku, ihe oriri, na mmiri ha na-aṅụ, na-echefu ngwaahịa ndị a na-eji na akpụkpọ anụ kwa ụbọchị. Ndị toxins ndị a na-agụnye pesticides, chemical plastics, na ihe mgbaze. Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnwale ihe kachasị mma iji ...
February 2, 2018 Admin blog Enweghị asịsa
Ụlọ Steam Mgbe Ọrụ
Mmega ahụ na ịrụ ọrụ bụ ihe ndị dị mkpa na-eme ka ahụ dị mma ma gbasie ike. Agbanyeghị, mgbatị ahụ oge niile siri ike na-agwụ ike, yana ịhapụ gị mgbu na akpịrị. Nke a pụtara na, holistically, mgbake nwere ike ịbụ ihe dị mkpa dị ka mmega ahụ n'onwe ya; iji bulie arụmọrụ nke gị ...
February 24, 2017 Akwụsị blog Enweghị asịsa
MYTH #1 Iji uzu uzuzu, ma ọ bụ saa, iji kwalite sweating na-enyere aka belata ọnụnọ nke toxins na ahụ gị. Otu n'ime ụzọ anụ ahụ gị nke na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha, bụ site na mmiri ọkụ (sweating). Otú ọ dị, ọ bụ naanị nchịkọta (1% ma ọ bụ obere) nke toxins na ahụ gị ...
Muhammad Ali (onye amụrụ Classius Clay, 1942 - 2016) ghọrọ onye nrite ọla edo olimpik n’afọ 1960 na ọkaibe n’ịgba ọkpọ n’ụwa n’afọ 1964. Njem ịkụ ọkpọ ya bidoro mgbe e zuru ohi Schwinn na-acha uhie uhie na ọcha ya wee zute onye uwe ojii bụ Joe Martin onye bụ ọkpọ. onye nkuzi. Muhammad Ali si ...
June 13, 2016 Akwụsị blog Enweghị asịsa
Atụmatụ ahụike maka ndị mbụ na-eche echiche ịmalite usoro mgbatị? Oge mbụ aga ụlọ mgbatị? Jiri nyocha 10 a na-enye ahụike maka ndị mbido iji hụ na ị ruru ihe mgbaru ọsọ gị. 1. Mee ka ọrụ gị bara uru Ọ bụrụ na ị bu n'obi inweta ihe kachasị na gị ọzụzụ ...
Aha ProForm igwe eji eme ihe bu ICON Health na Fitness. ICON Health na Fitness bụ ụlọ ọrụ sitere na Utah nke na-elekwasị anya n'ichepụta ngwa mmega. ICON Health & Fitness nwere ọtụtụ ụdị ọzọ a na-azọda ụkwụ gụnyere NordicTrack, Healthrider, na Freemotion. Ga-achọpụta na igwe nchekwa igwe si ...
Jụọ onwe gị na ị bara uru?
Onye ọ bụla nke na - agwa gị na enwere ngwa ngwa ma ọ bụ ọrụ ebube nke ga - enyere gị aka ị ga - adị oke mkpa n’enweghị mbọ ọ bụla na - agha ụgha. I nuru ya? Ha na-agha ụgha nye gị. Nke bụ eziokwu bụ na ọ nweghị ngwa ngwa mmezi ma ọ bụ ọrụ ebube mgbe ọ bịara ...
June 18, 2015 Akwụsị blog Enweghị asịsa
1 nke 212Next »